रा’जीनामा दे भनेको भए खु’रुक्क दि’न्थेँ, अपमानपूर्वक ह’टाइयो ! – Life Nepali
रा’जीनामा दे भनेको भए खु’रुक्क दि’न्थेँ, अपमानपूर्वक ह’टाइयो !
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकमा गोकर्ण विष्टले मन्त्रीबाट हटाइएकोमा दुःखेसो पोखेका छन् । स्थायी कमिटी बैठकमा बुधबार बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यसम्पादन मूल्या’ङ्कनमै प्रश्न उ’ठाएका थिए । पूर्व श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रहेका विष्टले मन्त्रीबाट हटाइँदा आफूले अ’पमानित म’हसुस गरेको र ह’टाइने विधि पनि स्पष्ट नभएको बताएका थिए । “रा’जीनामा मा’गेको भएँ खु’रुक्क दि’न्थेँ तर अ’पमानपूर्व ह’टाइयो,” उनले बैठकमा भनेको कुरा एक स्थायी क’मिटी स’दस्यले उ’द्धृत गरे ।
पूर्वमन्त्री विष्टले रा’जीनामा माग नगरिँदा ह’टाइँदा ‘अ’योग्य’को सन्देश गएको समेत बताएका थिए । उनले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पनि पारदर्शी नभएको भन्दै असन्तोष प्र’कट गरेका थिए । स्थायी कमिटी बैठकमा अर्का सदस्य सत्य’नारायण मण्डलले प्रदेश नम्बर दुई अरा’जकताको केन्द्र बनेको टिप्पणी गरेका छन् । कु’राकानीमा उनले आफूले बैठकमा प्रदेश दुईमा सी’माहीन अरा’जकता बढेको र गु’टबन्दीको वि’कृत रूप देखिन थालेको बारे ने’तृत्वको ध्या’नाकर्षण गराएको बताए । “प्रदेश २ मा धेरै अ’राजकता बढेको छ । कमिटीको निर्णय नमान्ने प्रचलन बढेको छ ।
अन्तरवि’रोध स्व’स्थ छ भने ठीकै हो । नत्र स्व’च्छन्दता हाबी हुन्छ,” उनले भने । उपनिर्वाचमा मधेसमा नेकपाको भोट बढेको कुरा पनि आफूले बैठकमा राखेको जानकारी दिए । “महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका हामीले जितेका छौं । अन्य स्थानमा पनि भोट राम्रो आएको छ,” उनले बैठकमा भनेको कुरा बताए। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावहरू माथि स्थायी कमिटीका सदस्य र आमन्त्रित सदस्यले विचार राख्नेक्रम जारी रह्यो ।
मातृका यादव, वर्षमान पुन, लीलामणि पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, गिरिराजमणि पोखरेल, रघुजी पन्त, गोकर्ण विष्ट, हरिबोल गजुरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, सत्यनारायण मण्डल र डा. पुष्पराज कँडेलले राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने, संगठनलाई अझ सुदृढीकरण गर्ने, विचार र आ’चरण सुधार गर्नुपर्ने, पार्टीको आगामी कार्ययोजनालाई मूर्त बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जस्ता विषय उठाएको बैठकपछि जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ । स्थायी कमिटीको अर्को बैठक बिहीबार पुस ३ गते बिहान ११ बजे धुम्बाराही, काठमाडौंमा बस्ने नेकपाले बताएको छ ।
Previous सीमा विवाद : हामी भूमी रक्षाको लागि प्रतिवद्ध छौं, आदेश जारी गर्नुपर्दैन’-प्रधानमन्त्री ओली
Next नेकपा–राजपा मिलेपछि डा. बाबुराम भट्टराईले भने, “बाँदर”